Tag: Gbasara nkwado | Martech Zone
Tag: Gbasara arụkọ
Mere anyị Anya Anyị Mkpa Dekọtara Agba Palette Atụmatụ… Ma Ebe Can Pụrụ Isi Mee Ha
Tọzdee, Machị 18, 2021 Tọzdee, Machị 18, 2021 Douglas Karr
You maara na e nwere n'ezie sayensị sayensị ka agba abụọ ma ọ bụ karịa wee kwado ibe ha? Adịghị m ophthalmologist ma ọ bụ optometrist, mana m ga-anwa ịtụgharị sayensị ebe a maka ndị dị mfe dị ka onwe m. Ka anyị malite na agba n'ozuzu. Agba Ndi Frequency Otu apụl na-acha uhie uhie… ziri ezi? Ọfọn, ọ bụghị n'ezie. Ugboro ole etu esi egosi ìhè na weghachite n’elu apụl na-eme ka ọ bụrụ ihe na-achọpụta, gbanwee site na